अर्जेन्टिनाका खेलाडी बसेको होटलमा नेपालीले देखाए खुकुरी | EuropeNepal.Net
अर्जेन्टिनाका खेलाडी बसेको होटलमा नेपालीले देखाए खुकुरी
Europe Nepal Sunday, June 29, 2014
Argentina player and the one shown Brice and the New Nepali Astana event marked the most difficult for many to believe? But some years are making the same old things fresh reading an interesting fact found.
अर्जेन्टिनाका खेलाडी र नेपाली एउटै होटलमा बसेको र त्यो माथि नेपालीले खुकुरी देखाएको घटना भन्दा धेरैलाई पत्याउन कठिन होला ? तर केही बर्ष पुरानो घटनालाई ताजा बनाउने हो भन्ने यस्तै एउटा रोचक तथ्य पढ्न पाइन्छ ।
अर्जेन्टिना र इङल्याण्डवीच फकल्याण्ड युद्ध भएको केही बर्षपछि मलेसियामा मर्डेका कप फुटवल भएको थियो । त्यतिवेला नेपाली टोली पनि त्यही फुटवल खेल्न गएका थिए । अर्जेन्टिनाको एउटा क्लव व्युनर्स आयर्सको टीम पनि त्यहां थियो ।
इतिहास भन्छ—नेपाली खेलाडी र अर्जेन्टिनाका खेलाडीसंगै विमान यात्रामा थिए । अर्जेन्टिनाका खेलाडी अगाडी गएर नेपाली खेलाडी सुरेश पन्थीले भनेछन्—हामी त गोर्खाली । उनले त्यसो भन्नुको कारण चाहि के बर्षअघि इङल्याण्डलाई विश्वकपमा हराउंदा म्याराडोनाले भनेका थिए रे—धन्न त्यो दिन टीममा गोर्खाली थिएनन् ।
संगै विमानमा भएका दुवै टीमका खेलाडीलाई एउटै होटलमा राखिएछ । होटलको लबीमा नेपाली खेलाडी सुरेश पन्थीले नै अर्जेन्टिनी खेलाडी अगाडी टलक्क टल्केको खुकुरी देखाएछन् । उनले फेरि भनेछन्—हामी त गोर्खाली । खासमा त्यो खुकुरी उपहार दिन लगिएको रहेछ । तर उनले त्यहां किन देखाए पत्तो भएन । अर्जेन्टिनाका खेलाडीलाई तर्साउन पो गरेका थिए की केही जानकारीमा छैन ।
पछि त्यो खेलमा अर्जेन्टिनाको टीमले नेपाली टीमलाई २—० ले हराए । नेपाली खेलाडीले राम्रै खेलेछन् । हारेपनि खुशी मनाएर फर्किएछन् । इतिहासका यस्ता घटना रोचक लाग्न सक्छन्, त्यसैले हामीले यहां प्रस्तुत गरेका हौं
EuropeNepal.Net: अर्जेन्टिनाका खेलाडी बसेको होटलमा नेपालीले देखाए खुकुरी